२०२१ बाथरूमको नलमा गाईड खरीद गर्दै
घर / नल गाईड / कसरी बाथरूम नल छनौट गर्न: २०२१ खरीद गाईड
2021 / 01 / 28 वर्गीकरणनल गाईड 560 0
तपाईको सिink्कको लागि बाथरूमको नल छनौट गर्नु साधारण निर्णय जस्तो लाग्न सक्छ तपाईले कति विकल्पहरू उपलब्ध छन् भनेर हेर्न सुरु नगरेसम्म। त्यहाँ बिभिन्न कन्फिगरेसनहरू, र colors्ग र फिनिशहरू, ह्याण्डल शैलीहरू, आकारहरू, र अधिक छन्। तपाईंलाई कसरी थाहा हुन्छ कि घाँसपट्टीमा कुन सुई तपाईंको बाथरूमको लागि उपयुक्त छ?
यो तपाइँको विकल्पहरू को साथ साथै तिनीहरूको फाईदा, विपत्ति र सीमितता बुझेर सुरू गर्न सहयोग गर्दछ। केहि तपाइँको बाथरूम को लागी एक विकल्प हुन सक्दैन। कुन प्रकारको तपाईंको आवश्यकता अनुसार सबै भन्दा उत्तम बाथरूम faucets को बीच विभिन्न भिन्नता तोड्न दिनुहोस्।
तपाईंको स्थापना विकल्पहरू बुझ्दै
प्राय: भ्यानिटीहरू र बाथरूम काउन्टरटपहरू नलका लागि प्रि-ड्रिल प्वालको साथ आउँदछन्। तपाईंले देख्न सक्नुहुनेछ कि केही व्यर्थहरू सिंकको पछाडि मात्र एउटा प्वाल हुन्छन् जबकि अरुसँग तीन हुन्छ। ती तीन प्वाल भएका प्वालहरूमा बिभिन्न ठाउँ हुन्छन्।
तपाईको भ्यानिटी वा काउन्टरटपमा हेर्नुहोस् तपाईसँग कस्तो प्वाल छ कन्फिगर गर्नुहोस्, किनकि यसले नलको लागि तपाइँको छनौटलाई सीमित गर्दछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंसँग एक मात्र प्वाल छ भने, तपाईं तीन खालको नल स्थापना प्रयोग गर्न सक्षम हुनुहुने छैन जब सम्म तपाईं थप अनुकूलन गर्नुहुन्न।
प्वालहरूको संख्याको अतिरिक्त, कसरी प्वालहरू राखिएको छ हेर्नुहोस्। यदि तपाईंसँग तीन प्वालहरू छन् भने, दुबै छेउमा दुबै टाढा प्वालहरू बीचको दूरी नाप्नुहोस्। बिभिन्न प्वालहरू बिभिन्न प्वाल लेआउटहरूको लागि बनाइन्छ।
यी मापनहरू र सीमाहरूलाई दिमागमा राख्दै, तपाईं कुन स्थापना कन्फिगरेसनहरू हुन् र यो स्थापना प्रकारहरू अन्वेषण गर्दा तपाईंको लागि विकल्प नभएर तपाईं अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ।
नल स्थापना प्रकारहरू
नल र ह्यान्डलहरूका बीच, त्यहाँ धेरै भिन्न तरिकाहरू छन् जुन नल सेट बिछ्याउन सकिन्छ। यी साधारण कोटीहरू हुन् जुन तपाईले फेला पार्नुहुनेछ।
क्रोम बाथरूम नल सेन्टरसेट नल
एक सेन्सेट नल संग एक नल र दुई ह्यान्डलहरू छन्, तर तिनीहरू सबै एक आधारमा माउन्ट भइसकेका छन्। यी विशेष गरी साना भिन्निटहरूका लागि सामान्य हो किनभने तिनीहरू कम्प्याक्ट छन्। एउटा सेन्सेट नललाई तीन-होल स्थापना आवश्यक हुन्छ, र तिनीहरू मध्ये धेरै फरक आधार आकारमा आउँछन्, त्यसैले तपाईले एउटा छनौट गर्नु पर्छ जुन तपाईको भ्यानिल प्वालहरू बीचको दूरी मिल्दछ।
क्रोम एकल-होल faucets बाथरूम नल
यसको नामको लागि सहि, एकल-प्वालको नलमा केवल एउटा टुक्रा हुन्छ: नल। यिनीहरू मध्ये धेरैसँग फालमा बनाइएको ह्यान्डल हुन्छ, सामान्यतया टाउकोको माथि।
बहुमत एकल-प्वाल faucets छोटो छ, तर त्यहाँ पोत faucets, जो पोत सिंकको लागि डिजाइन गरिएको छ त्यसैले तिनीहरू परम्परागत faucets भन्दा अग्लो छन्। जेसुकै होस्, यदि तपाईंसँग एकल प्वाल स्थापना छ भने, यी faucets को प्रकारहरू तपाईंलाई आवश्यक पर्दछ।
ब्रश निकल व्यापक बाथरूम को लागी faucets
एक नल र दुई ह्यान्डलहरू एक व्यापक नलका तीन अलग भागहरू छन्। Centreet faucets विपरीत, व्यापक faucets एक आधार छैन; यी तीन भागहरू खुला बेमानी वा तिनीहरू बीच काउन्टरटप स्पेसको साथ अलग स्थापना गरिएको छ।
यी faucets मात्र एक विकल्प हो यदि तपाईंसँग तपाईंको वैनिटीमा व्यापक तीन-होल कन्फिगरेसन छ। भाग्यवस, यद्यपि यी तीन टुक्रा छुट्टि छन्, त्यस्तै नल छनौट गर्नु पर्दैन जुन तपाईंको लेआउटको ठीक चौडाइसँग मेल खान्छ: विचार केन्द्र जुन केन्द्र सेट faucets को लागी महत्त्वपूर्ण छ।
भित्ता माउन्ट faucets
वाल माउंट बाथरूम नल क्रोम
भित्ता माउन्ट faucets एक बढ्दो प्रवृत्ति हो, विशेष गरी लक्जरी बाथरूमहरूमा। तिनीहरूको नामको लागि सहि, यी faucets भ्याँटीमा भन्दा तपाईंको सिंक पछाडिको पर्खाल वा ब्याकस्प्लासमा माउन्ट गरिएको छ। यसले काउन्टरटपमा अधिक ठाउँ खाली गर्दछ, यद्यपि यसले तपाईंको बाथरूमको मूल्यमा थप्न खोज्दछ किनभने प्राय: स्थापना प्वाइन्टमा पुग्न केही पाइपहरू सार्न प्लम्बरको आवश्यकता पर्दछ।
तपाइँको नल स्थापना प्रकारलाई असर गर्ने कारकहरू
कसरी थाहा पाउने कि यी नल स्थापना प्रकारहरू मध्ये कुन तपाईंको लागि विकल्पहरू हुन्? यी कारकहरूलाई विचार गर्नुहोस्।
वर्तमान स्थापना प्वालहरू
तपाईंको भ्यानिटी वा काउन्टरटपमा प्रि-ड्रिल प्वालहरूमा फिर्ता जानुहोस्। एक लागत प्रभावी बाथरूम अपडेटको लागि, एक नल छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको काउन्टरटपमा कन्फिगरेसनको प्रकारको लागि बनेको छ।
तपाईंसँग अतिरिक्त प्वालहरू ड्रिल गर्न विकल्प छ, तर यो महँगो हुन सक्छ। दिमागमा राख्नुहोस् कि यदि तपाईसँग तपाईको भ्यानिटीमा तीन प्वालहरू छन् भने तपाईले एकल-प्वाल नल छनौट गर्न सक्नुहुन्छ, तर नलको खोजी गर्नुहोस् जुन प्रयोग नगरिएको प्वालहरू ढाक्नको लागि एक तरीका छ।
तपाईं आफ्नो नल तपाईंको भ्यानिटी वा काउन्टरटपको आकार अनुपातमा हुन चाहनुहुन्छ। सामान्यतया, साना भिन्तीहरू एकल प्वाल, केन्द्र सेट, वा भित्ता माउन्ट faucets संग राम्रो काम गर्दछ। फराकिलो faucets अधिक ठुलो र काउन्टरटप्सको अधिक अनुपातिक हो।
धेरै जसो faucets परम्परागत, in-set सिंक बेसिनहरु को लागी डिजाइन गरीएको छ। यद्यपि पोतको डूबहरू अधिक लोकप्रिय हुँदैछन्। यदि तपाईंसँग वा पात्र डुब्ने योजना छ भने, पात्र सि vessel्ग वा भित्ता-माउन्ट गरिएको नल छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईंको सिinkक समायोजन गर्न पर्याप्त छ।
नल ह्यान्डल र पानी नियन्त्रण विकल्पहरू
अर्को भिन्नता तपाईले नलको बीचमा देख्नुहुनेछ उनीहरूले पानी नियन्त्रण गर्ने तरिका हो, जस्तै उनीहरूले प्रयोग गर्ने ह्यान्डलहरूको संख्या र ती ह्यान्डलहरू सार्ने तरिका। यी सम्भावित कोटीहरू जुन तपाईले फेला पार्नुहुनेछ।
एकल ह्यान्डल बाथरूमको नल ब्रश निकल
एकल-ह्यान्डल faucets सँग एक ह्यान्डल छ कि पानी र पानी तापमान दुबै नियन्त्रण गर्दछ। ह्यान्डल सामान्यतया तापक्रम नियन्त्रण गर्न बाँया र दायाँ फर्कन्छ, जबकि पानीको बहाव नियन्त्रण गर्न माथि र तल पनि मोडिन्छ।
यस प्रकारका ह्यान्डलहरू एकल-प्वालको नलका साथै भाँडाका नलहरू र भित्तामाउन्ट faucets मा सामान्य छन्। धेरै व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई तातो र चिसो पानीको लागि छुट्टै ह्यान्डलहरू भन्दा व्यवस्थित गर्न सजिलो पाउँदछन् किनकि ती दुई बिच सहि सन्तुलन पाउन गाह्रो हुन सक्छ।
दुई-ह्यान्डल नल तेल तेल रबड ब्रॉन्ज व्यापक बाथरूम सिंक नल
Centeret र व्यापक faucets को लागी, तपाइँको faucets दुई अलग ह्यान्डल हुन आशा गर्नुहोस्। एउटाले चिसो पानीको लागि बहावलाई नियन्त्रण गर्दछ जबकि अर्कोले तातो पानीको लागि बहावलाई नियन्त्रण गर्दछ। एकल-ह्यान्डल नलको विपरीत, यी ह्यान्डलहरू केवल एक तरीकाले मोडिन्छ: या त बाँया र दायाँ वा माथि र तल।
टच-एक्टिवेटेड नल एक नल हो जुन नलको सतहमा टचको साथ सक्रिय हुन्छ। अर्को शब्दहरुमा, तपाईलाई एक विशिष्ट ह्याण्डल खोल्नु आवश्यक पर्दैन। तपाईंको हात, हात, वा कुहिनो मात्र ट्याप नल सक्रिय हुनेछ।
यी faucets विशेष गरी सेनेटरी उद्देश्य को लागी उपयोगी छ। यदि तपाईका हातहरू फोहोर छन् भने, उदाहरणका लागि, तपाई फोहोर हातमा ह्यान्डलहरू छोएर तपाईको कुहिनो द्वारा नल खोल्न सक्नुहुन्छ।
तापमान नियन्त्रण यस प्रकारको नलहरूमा भिन्न हुन्छ। कसैसँग प्रि-सेट तापक्रम हुन्छ, त्यसैले पानी जहिले पनि समान तापमानमा बाहिर आउँछ। अरूसँग एक वा दुई ह्यान्डलहरू हुन्छन् जसलाई तापक्रम नियन्त्रण गर्न तपाईले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, ताकि तपाई पानीलाई सक्रिय पार्न सक्नुहुन्छ र तापक्रम समायोजन गर्नुभन्दा पहिले तपाईको हातलाई सुरुवाती कुल्ला दिन सक्नुहुन्छ।
तिनीहरूको नामको लागि सत्य, स्पर्श रहित faucets लाई कुनै सम्पर्कको आवश्यक छैन। तिनीहरूसँग सेन्सरहरू छन् जसले तपाईंको हातहरू नलको नजीक आउँदा पत्ता लगाउँछ, र ती सेन्सरहरूले नल खोल्दछन्। केही टच-सक्रिय faucets जस्तै, टचलेस faucets लगभग सधैं एक पूर्व सेट तापमान छ।
कारकहरू जसले तपाईंको ह्यान्डल र पानी नियन्त्रणलाई असर गर्छ
तपाईं कसरी आफ्नो बाथरूमको लागि उत्तम ह्याण्डल र पानी नियन्त्रण संयन्त्र छनौट गर्नुहुन्छ? त्यहाँ धेरै कारकहरू छन् जसले तपाईंको निर्णयलाई प्रभाव पार्दछ।
हात गतिशीलता कौशल
के तपाईंको घरमा कोही कोही वा तपाईंको घर भ्रमण गर्ने कोहीलाई तिनीहरूको हातको गतिशीलतामा समस्या छ? उनीहरूलाई जोर्नीशोथ, स्नायु क्षति, वा अन्य प्रकारको बिमारी वा चोट हुन सक्छ। यदि त्यस्तो हो भने, कुनै टचलेस वा टच-एक्टिवेटेड नललाई कम हात शक्ति र समन्वय चाहिन्छ त्यसैले तिनीहरूलाई व्यवस्थित गर्न सजिलो हुनेछ।
चिसो, फ्लू र कोभिड १ p महामारीको बीचमा तपाईका घरलाई अझ कीटाणुमुक्त बनाउनका लागि विभिन्न कारणहरू खोज्नु पर्ने थुप्रै कारणहरू छन्। यो विशेष गरी सही हो यदि तपाईं बच्चाहरू हुनुहुन्छ भने, तिनीहरूका सानो हातहरूले उनीहरूलाई प्रशस्त फोहोर र अन्य गडबड पदार्थहरूको लागि बाटो खोज्छन्। सुरक्षा र स्वास्थ्यका लागि टचलेस वा टच-एक्टिवेटेड faucets तपाईंको उत्तम शर्त हुनेछ।
नल स्थापनाको प्रकार
तपाइँको भ्यानिटिमा तपाइँको नल स्थापना कन्फिगरेसनमा फिर्ता जानुहोस्। प्वालहरूको संख्या तपाईले छान्नु हुने ह्यान्डलको प्रकारहरूको लागि विकल्पहरू सीमित गर्न सक्दछ। यदि तपाईंसँग एकल-प्वाल कन्फिगरेसन छ भने, तपाईं सम्भवतः दुईवटा ह्यान्डलको नल छनौंट गर्न सक्नुहुन्न जबसम्म तपाईं थप अनुकूलन गर्नुहुन्न।
नल ह्याण्डल शैलीहरू
जब तपाईको नल छनौट गर्नुहुन्छ, तपाईले चाहानु हुने ह्यान्डलहरूको शैलीलाई ध्यानमा राख्नु महत्त्वपूर्ण छ, केवल ह्यान्डलहरूको संख्या मात्र होईन। यी शीर्ष विकल्पहरू विचार गर्नुहोस्।
घुंडी ह्यान्डलहरू सामान्यतया गोलो ह्यान्डलहरू हुन् जुन तपाईं तपाईंको पानीको प्रवाह र तापक्रम नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ। केही व्यक्ति तिनीहरूलाई रुचाउँछन् किनकि तिनीहरू लिभरल ह्यान्डलहरू भन्दा कम्प्याक्ट हुन्छन्। तपाईले दुईवटा ह्यान्डल नल कन्फिगरेसनमा मुख्य रूपमा घुँडा देख्नुहुनेछ, यद्यपि त्यहाँ केही सिंगल-ह्यान्डल नलहरू छन् जसमा नब छ जुन सबै दिशामा सर्दछ।
एक लीभर ह्यान्डल सबैभन्दा सामान्य प्रकारको ह्यान्डल हो जुन तपाईं faucets मा देख्नुहुनेछ। यो एक तेर्सो रड जस्तै आकारको हुन्छ, यद्यपि प्रत्येक ह्याण्डलको आफ्नै शैली र वक्रता हुन्छ। नोब्स जस्तै, यी ह्यान्डलहरू सामान्यतया दुई-ह्यान्डल faucets मा देखा पर्दछ र बायाँ र दायाँ मात्र मोडिन्छ।
जब तपाईंसँग एकल-ह्यान्डल नल हुन्छ, त्यो ह्यान्डल सामान्यतया जोइस्टिक स्टैंड हुन्छ। यी लामो ह्यान्डलहरू हुन् जुन माथि र तलको साथसाथै देब्रे र दायाँ घुम्दछन् ताकि तिनीहरूले दुबै तापक्रम र पानीको प्रवाह नियन्त्रण गर्न सक्दछन्। तिनीहरू सामान्यतया नल टाउको मा आफै संलग्न छन्।
कारकहरू जसले तपाईंको ह्यान्डल विकल्पलाई असर गर्दछ
जब तपाईं आफ्नो नयाँ बाथरूम नलको लागि तपाईंको ह्यान्डल विकल्पहरू विचार गर्नुहुन्छ, यी कारकाहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस्।
बिभिन्न ह्यान्डल कन्फिगरेसनको साथ, तपाईले छान्नु हुने ह्यान्डलको प्रकार तपाईको परिवारका सदस्यहरूको हात गतिशीलतामा निर्भर हुन सक्छ। Knobs, उदाहरण को लागी, एक पकड आवश्यक छ ताकि तिनीहरू सीमित हात शक्ति र हात नियन्त्रण संग व्यक्तिको लागि प्रयोग गर्न अधिक गाह्रो छ। जॉयस्टिकहरू र लीभरहरू अधिक पहुँच योग्य छन्।
नल कन्फिगरेसनको प्रकार तपाईले छनौट ह्यान्डल को लागी छनौट हुनेछ। उदाहरण को लागी, यदि तपाईंलाई एकल-ह्यान्डल नल चाहिन्छ भने, यी प्राय: जियोस्टिक ह्याण्डलमा हुनेछन्।
बाथरूम नलका लागि विकल्पहरू समाप्त गर्नुहोस्
बाथरूम faucets को लागी कन्फिगरेसन र प्रयोज्य कुरा को रूप मा, तपाईं पनि नल आफ्नो बाथरूम मा राम्रो हेर्न चाहानुहुन्छ। त्यहाँ विभिन्न र colorsहरू र फिनिशहरू आउँदछन्, त्यसैले यी विकल्पहरूलाई दिमागमा राख्नुहोस्।
बाथरूम सेन्टरसेट नल क्रोम
क्रोम बाथरूम faucets र अधिक बाहिर को लागी सबैभन्दा व्यापक रूप मा ज्ञात समाप्त हो। यसको चाँदी जस्तो रंग र उच्च चमक चमकले यसलाई लोकप्रिय छनौट बनाउँदछ।
पप-अप ड्रेन असेंबलीको साथ केन्द्र बाथरूम नल
निकल नलमा चाँदीको जस्तो वा लगभग ट्यान रंग हुन सक्दछ, पहेंलो अंडरटोनको साथ। दुबैले ब्रश निकल, जसको साटन शीन छ, र पॉलिश निकल, जुन ग्लोसियर हो, आधुनिक र परम्परागत बाथरूमहरूमा सामान्य छ।
बाथरूम सिink्क नल4ईन्च केन्द्र तेल रब्ब कांस्य
यसको गाढा खैरो, लगभग कालो रoration्गको साथ, तेलले घेरिएको काँसा हालका वर्षहरूमा लोकप्रियतामा आकाश गएको छ। यो परम्परागत वा समकालीन शैलीको साथ बाथरूमहरूमा सामान्य हो, र यसमा सामान्यतया नरम साटन शीन हुन्छ।
ब्रास धेरै चोटि लोकप्रियतामा सर्दै र बाहिर सर्‍यो, तर आज, यो बाथरूमको नलका लागि बढ्दो विकल्प हो। निकेल जस्तै धेरै, तपाईं दुवै ब्रश काँसा र पॉलिश काँसा faucets फेला पार्नुहुनेछ।
भेल सिंक नल मैट कालो
म्याट कालो faucets को लागी एक नयाँ विकल्प हो र एक धेरै लोकप्रिय बनिरहेको छ, विशेष गरी आधुनिक घरहरूको लागि। चमकमुक्त शैली बोल्ड र समकालीन हो जबकि कालो ह्यु लगभग कुनै पनि रंग योजनासँग मिल्न सजिलो छ।
बाथरूम सिंक नल स्टेनलेस स्टील
स्टेनलेस स्टील भान्सामा लोकप्रिय छ, यो अब बाथरूम faucets को लागी एक सामान्य विकल्प हो। यो प्राय: ब्रश निकल जस्तै देखिन्छ तर निलो अण्ड्रोटोनको अधिक, र थोरै चमकदार फिनिशको साथ।
नलक समाप्त बीचमा तपाइँको छनौटलाई असर पार्ने कारकहरू
यी मध्ये कुन समाप्त शैलीहरू तपाईको बाथरूमको नलको लागि सही विकल्प हो? यी कारकहरूलाई विचार गर्नुहोस्।
स्पष्ट रूपमा, तपाइँ तपाइँको बाथरूममा एक सुसंगत, सौन्दर्यपूर्वक मनमोहक दृश्य प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ। विभिन्न नल फिनिशले विभिन्न शैली र रंगहरूको पूरक हुन्छ, त्यसैले एउटालाई छनौट गर्नुहोस् तपाईंको शैलीलाई उत्तम सूटहरू।
केहि समाप्त अरूलाई भन्दा कायम राख्न सजिलो छ, र तिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो पक्ष र विपक्ष छ। ग्लोसियर फिनिशले दाग र औंठाछापहरू देखाउँदछ म्याट र साटन फिनिश भन्दा बढी सजीलो हुन्छ, तर तिनीहरू सफा गर्न पनि सजिलो छ। तपाईंको नल समाप्त छनौट गर्दा तपाईंको प्राथमिकताहरू तौल गर्नुहोस्।
बाथरुमको भरमा त्यो सहज शैली प्राप्त गर्न, धेरै व्यक्तिहरू उनीहरूको नल कोठामा भएका अन्य सामानहरूसँग मिरर गर्न चाहन्छन्, जस्तै आफ्ना ऐनामा, काउन्टरटप उपकरणहरू र अन्य टुक्राहरू। तपाईंको नल फिनिश जति लोकप्रिय छ, यो गर्न सजिलो हुन्छ।
तपाईको बाथरूमको नल छनौट गर्दै
स्पष्ट रूपमा, त्यहाँ धेरै कुरा छ जुन तपाईंको अर्को बाथरूमको नल चयन गर्न जान्छ। यो विभिन्न मोडेलहरू र विकल्पहरू बुझ्ने कुरा हो, जुन तपाईंको बाथरूम र तपाईंको भ्यानिटीको आधारमा कुन उपलब्ध छन् निर्धारण गर्नुहोस्, र तपाईंको सबै आवश्यकताहरू र लक्ष्यहरूको लागि उत्तम फिट फेला पार्नुहोस्। अधिक मद्दतको लागि र शीर्ष नल विचारहरूको लागि, हाम्रो अतिरिक्त बाथरूमको नल खरीद मार्गनिर्देशहरू जाँच गर्नुहोस्।
सम्बन्धित बाथरूम नल श्रृंखला सिफारिस
अघिल्लो :: कसरी म्याट कालो बाथरूम फिक्स्चर सफा गर्ने अर्को: कसरी म्याट कालो रसोईको नल सफा गर्ने
2021 / 05 / 13 1425
2021 / 05 / 09 1057
2021 / 05 / 08 935
2021 / 02 / 04 884
2021 / 02 / 03 900
2021 / 02 / 03 944